Nhare yeMagetsi Wiricheya yeVose
A wiricheya inogona kutsanangurwa senhare mbozha inogona kubatsira iyo remara uye kurwara kuwana kufamba. Chigadzirwa chinoratidzika sachigaro chakaiswa pamakumbo mana uye chinogona kumisikidzwa nemushandisi kana nekushandisa magetsi. Mawiricheya tendera avo vane hurema kufamba famba vasina rubatsiro rwevamwe.
Mawiricheya izvo zvinofambiswa nemagetsi zvinowanzodaidzwa kunzi magetsi Mawiricheya uye mota ndiyo moyo wemagetsi wiricheya. Iyo inogona kushandiswa kune yekunze kana zvemukati zvinangwa uye kazhinji inotanga kutenderedza madhora chiuru nemazana mashanu.
Pane zvakawanda zvishongedzo pamusika zvinoenderana nezvinodiwa zve wiricheya vashandisi. Pakusarudza a wiricheya, pane zvimwe zvakakosha zvekuchengetedza mupfungwa. Ukuru uye huremu hwemushandisi ndizvo zvinowanzo kutanga kufunga.
Will the wiricheya kushandiswa mukati meimba kana kunze kana zvese zviri zviviri? Chii chinorema cheya chigaro? Uyezve tarisa pane sosi yesimba uye garandi. Uye pakupedzisira pane mutengo.
Electric Mawiricheya akakodzera kune avo vasingakwanise kufamba zvakanyanya uye vasina kusimba zvakakwana kusundira a wiricheya yemawoko.
Kugadziridza Magetsi Mawiricheya
Zvinhu zvinouya mukutamba kune vanhu vanofanirwa kuve kushandisa magetsi wiricheya inosanganisira kuoma mitezo, zera, huremu, mapfupa akavhunika kana asina kusimba, hosha dzetsinga dzinodzikira kana zvimwe zvirwere zvinokanganisa kufamba kwese.
Electric Mawiricheya akatwasuka kumberi kushandisa nekuda kwesimba ravo remagetsi uye nyore kushandisa joystick. Iwo zvakare anofambika zvakanyanya uye anokwanisa kutenderera zvizere 360 ​​madhigirii. Ivo vakanyarara kana vachishandiswa asi ivo vanodawo kumwe kuchengetedzwa zvichienzaniswa nebhuku remanyorerwo Mawiricheya.
Tichifunga nezvekufambira mberi kwetekinoroji, Mawiricheya dzave dzinochinja-chinja zvakanyanya uye dzinogona kugadzirisa chero chero kuremara. Iwo matsva mamodheru anouya akashongedzerwa nekumiswa kwechirimo, pneumatic mavhiri, hydraulic masisitimu ese ayo anoita kuti chigaro chiwedzere uye chisimbe.
Iwo matatu ekutanga magetsi Mawiricheya zviripo ndeizvi:
Shure mavhiri anotyairwa nezvigaro:
Rear wheel drive Mawiricheya ndiwo marudzi akajairika emagetsi Mawiricheya. Iwo anokurumidza kufananidzwa neyemberi-vhiri dhiraivhiti mamodheru asi haamhanyisa seyapamberi nepakati nepakati vhiri modhi.
Pamberi vhiri rinotyairwa zvigaro:
Kumberi mavhiri anotyairwa nemacheya anozivikanwa nekuda kwekugona kwawo uye kuchinjika asi iwo anowanzo nonoka.
Mid vhiri rinotyairwa zvikamu:
Pakati pemavhiri anotyaira macheya ane akanakisa kutendeuka huwandu hwemhando idzi dzemacheya asi iwo anenge asina kugadzikana kana uchitanga kana kumira.
Mamwe marudzi ezvigaro anosanganisira ultra-lightweight kusvika basa rinorema, kurereka muchadenga zvigaro, zvigaro zvekufambisa, zvigaro zvakakwirira, zvigaro zvevhu zvakashata uye zvevana Mawiricheya yakanangana nevana.